Ahoana no Amantarana ny Fivavahana Marina? | Ampianarina
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Ateso Aymara Bambara Baoulé Basque Bengali Bichlamar Bicol Boligara Boulou Cakchiquel Afovoany Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuuk Cinghalais Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Guna Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kabyle Kalenjin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kissi Kongo Konkani (Romanina) Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Laosianina Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mende Mingrelian Miskito Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Niue Norvezianina Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Arabo) Ouïgour (Sirilika) Palau Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quiché Rarotonga Romanianina Rosianina Rotumien Runyankore Rutoro Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tandroy Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Touva Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yap Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Eken’Andriamanitra daholo ve ny fivavahana rehetra?
Iza no tena mpanompon’ Andriamanitra ankehitriny?
1. Inona ny soa ho azontsika, raha manompo an’Andriamanitra araka izay tiany isika?
TENA miahy antsika i Jehovah Andriamanitra sady mitady izay hahasoa antsika, ka omeny tari-dalana isika. Ho sambatra sy hisoroka olana be dia be isika, raha manompo azy araka izay tiany. Hotahiny sy hampiany koa isika amin’izay. (Isaia 48:17) Be dia be ny fivavahana milaza fa mampianatra ny marina, nefa samy hafa be ny zavatra ampianariny momba an’Andriamanitra sy izay takiny amintsika.
2. Inona no tokony hataonao mba hamantarana hoe ahoana no tian’i Jehovah hanompoana azy? Hazavao amin’ny ohatra.
2 Ahoana no tian’i Jehovah hanompoana azy? Tsy voatery handinika sy hampitaha ny fampianaran’ireo fivavahana be dia be ankehitriny ianao, vao hahalala an’izany. Izay tena ampianarin’ny Baiboly momba ny fivavahana marina ihany no ilainao hianarana. Haka ohatra isika: Olana any amin’ny tany maro ny vola sandoka. Raha asaina mamantatra an’ireny vola sandoka ireny ianao, ahoana no anavahanao azy? Hotadidinao daholo ve ny karazana vola sandoka rehetra? Tsy aleo ve ilay vola tena izy no dinihina tsara? Hahay hanavaka an’izay vola sandoka ianao, rehefa fantatrao tsara ny endrik’ilay vola tena izy. Hahay hanavaka ny fivavahana diso koa ianao, rehefa fantatrao tsara izay mampiavaka ny fivavahana marina.
3. Inona no nolazain’i Jesosy fa tsy maintsy ataontsika, raha te hankasitrahan’Andriamanitra isika?
3 Zava-dehibe ny manompo an’i Jehovah araka izay tiany. Maro no mieritreritra fa eken’Andriamanitra ny fivavahana rehetra. Tsy izany anefa no ampianarin’ny Baiboly. Tsy ampy ny milaza hoe Kristianina ianao. Hoy i Jesosy: “Tsy izay rehetra milaza amiko hoe: ‘Tompo ô, Tompo ô’, no hiditra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko izay any an-danitra.” Tsy maintsy mamantatra sy manao izay takin’Andriamanitra isika, raha te hankasitrahany. Nantsoin’i Jesosy hoe “mpandika lalàna” ny olona tsy manao ny sitrapon’Andriamanitra. (Matio 7:21-23) Tsy misy dikany hoatran’ny vola sandoka ny fivavahana diso, ary misy vokany ratsy mihitsy aza.
4. Inona ilay hoe “lalana” noresahin’i Jesosy, ary mankaiza avy ireo lalana roa ireo?
4 Tian’i Jehovah hiaina mandrakizay ny olona rehetra. Tsy maintsy manompo azy araka izay tiany, sy manao zavatra ankasitrahany foana anefa isika, raha te hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa. Mampalahelo fa tsy manaiky hanao an’izany ny olona maro. Izany no nahatonga an’i Jesosy hiteny hoe: “Midira amin’ny vavahady tery. Fa lehibe sady malalaka ny lalana mankany amin’ny fandringanana, ka maro no miditra any. Tery kosa ny vavahady ary ety ny lalana mankany amin’ny fiainana, ka vitsy no mahita azy.” (Matio 7:13, 14) Manampy ny olona hahazo fiainana mandrakizay ny fivavahana marina. Mitarika any amin’ny fandringanana kosa ny fivavahan-diso. Tsy misy olona tian’i Jehovah ho ringana anefa, ka omeny fotoana hianarana momba azy ny olona rehetra. (2 Petera 3:9) Miankina amin’ny fivavahana arahintsika àry ny hahavelona na hahafaty antsika.
FOMBA AMANTARANA NY FIVAVAHANA MARINA
5. Ahoana no amantarana an’ireo manaraka ny fivavahana marina?
5 Ahoana no ahitana an’ilay “lalana mankany amin’ny fiainana”? Nilaza i Jesosy fa hita amin’izay ataon’ny olona raha manaraka ny fivavahana marina izy na tsia. Hoy izy: ‘Ny voa izay vokariny no hahafantaranareo tsara azy ireny. Ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara.’ (Matio 7:16, 17) Mora fantatra àry ireo manaraka ny fivavahana marina, rehefa jerena ny zavatra inoany sy ny fitondran-tenany. Tsy lavorary izy ireo ary manao fahadisoana, nefa miezaka manao ny sitrapon’Andriamanitra. Ireto misy lafiny enina amantarana an’ireo manaraka ny fivavahana marina:
6, 7. Ahoana ny fiheveran’ny mpanompon’Andriamanitra ny Baiboly, ary inona ny modely navelan’i Jesosy momba an’izany?
6 Avy ao amin’ny Baiboly ny zavatra ampianariny. Hoy ny 2 Timoty 3:16, 17: “Ny Soratra Masina iray manontolo dia avy amin’ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra, ary mahasoa mba hampianarana, hananarana, hanitsiana izay diso, hanafaizana araka ny fahamarinana, mba hahatonga ny olon’Andriamanitra ho tena mahay sy ho ampy fitaovana tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.” Nilaza tamin’ny Kristianina ny apostoly Paoly hoe: “Rehefa nandray ny tenin’Andriamanitra renareo avy taminay ianareo, dia tsy noraisinareo ho tenin’olona izany fa araka ny tena izy, dia tenin’Andriamanitra.” (1 Tesalonianina 2:13) Izay lazain’ny Baiboly àry no inoan’ireo manaraka ny fivavahana marina sy ampihariny amin’ny fiainana, fa tsy hevitr’olona na lovantsofina.
7 Namela modely i Jesosy, satria izay lazain’ny Tenin’Andriamanitra no nampianariny. Hoy izy rehefa nivavaka tamin’ilay Rainy any an-danitra: “Ny teninao no fahamarinana.” (Jaona 17:17) Nino ny Tenin’Andriamanitra i Jesosy, ary nifanaraka tamin’izy io ny zavatra rehetra nampianariny. Matetika izy no niteny hoe “voasoratra hoe”, dia avy eo nanonona andinin-teny. (Matio 4:4, 7, 10) Tsy mampianatra ny heviny koa ny vahoakan’Andriamanitra ankehitriny. Mino izy ireo hoe Tenin’Andriamanitra ny Baiboly, ka izay voalaza ao ihany no ampianariny.
8. Inona no anisan’ny fanompoana ataon’ny tena Kristianina?
8 Mivavaka amin’i Jehovah irery ihany izy ireo, ary mampahafantatra ny anarany. Hoy i Jesosy: “I Jehovah Andriamanitrao no tsy maintsy iankohofanao, ary ho azy irery ihany no tsy maintsy anaovanao fanompoana masina.” (Matio 4:10) I Jehovah irery ihany àry no ivavahan’ny tena Kristianina. Anisan’ny fanompoana ataon’izy ireo ny mitory ny anaran’Andriamanitra sy ny toetrany. Hoy ny Salamo 83:18: “Ianao irery ihany, izay manana anarana hoe Jehovah, no Avo Indrindra ambonin’ny tany manontolo!” Nanampy ny olona hahafantatra an’Andriamanitra i Jesosy. Manaporofo an’izany ilay vavaka nataony hoe: “Ny anaranao efa nampahafantariko ny olona izay nomenao ahy avy tamin’izao tontolo izao.” (Jaona 17:6) Manahaka azy koa ny tena Kristianina, ka mampahafantatra ny anaran’Andriamanitra sy ny fikasany ary ny toetrany.
9, 10. Ahoana no ahitana fa mifankatia ny tena Kristianina?
9 Tena mifankatia izy ireo, ary fitiavana tsy mitady valiny ny azy. Hoy i Jesosy: “Raha mifankatia ianareo, dia izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo.” (Jaona 13:35) Nifankatia hoatr’izany koa ny Kristianina fahiny. Raha maneho an’io fitiavana io isika dia tsy manavakavaka hoe fotsy na mainty, na hoe mahantra na manankarena, fa mifankatia hoatran’ny mpiray tam-po. (Vakio ny Kolosianina 3:14.) Tsy mba hoatr’izany ny any amin’ny fivavahan-diso. Misy, ohatra, mifamono satria tsy mitovy firenena na foko. Ny tena Kristianina anefa tsy mamono ny mpiray finoana aminy na ny olon-kafa, sady tsy mampiasa fitaovam-piadiana. Hoy ny Baiboly: ‘Izao no ahitana miharihary izay zanak’Andriamanitra sy izay zanaky ny Devoly: Izay rehetra tsy manao ny marina dia tsy avy amin’Andriamanitra. Toy izany koa izay tsy tia ny rahalahiny. Tokony hifankatia isika, fa tsy toa an’i Kaina, izay avy tamin’ilay ratsy ka namono nahafaty ny rahalahiny.’—1 Jaona 3:10-12; 4:20, 21.
10 Tsy ampy anefa ny hoe tsy mamono olona. Mahafoy fotoana sy hery ary fananana ny tena Kristianina, mba hanampiana sy hampaherezana ny hafa. (Hebreo 10:24, 25) Tsy manambaka namana izy ireo, ary vonon-kanampy rehefa misy olana sady tsy manantena valiny. ‘Manao soa amin’ny rehetra’ foana izy ireo.—Galatianina 6:10.
11. Nahoana isika no mila manaiky fa amin’ny alalan’i Jesosy Kristy no amonjen’Andriamanitra ny olona?
11 Eken’izy ireo fa amin’ny alalan’i Jesosy Kristy no amonjen’Andriamanitra ny olona. Hoy ny Baiboly: “Tsy misy olon-kafa hahazoana famonjena, satria tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona hahazoantsika famonjena.” (Asan’ny Apostoly 4:12) Efa hitantsika fa nanao sorona ny ainy i Jesosy mba hamonjena ny olona mankatò. (Matio 20:28) Izy koa no notendren’Andriamanitra ho Mpanjakan’ilay Fanjakany any an-danitra, ka hitondra ny tany manontolo. Raha te hiaina mandrakizay isika, dia tsy maintsy mankatò azy sy mampihatra an’izay nampianariny, satria izay no takin’Andriamanitra. Hoy ny Baiboly: “Izay maneho finoana ny Zanaka dia manana fiainana mandrakizay. Izay tsy mankatò ny Zanaka kosa tsy hahita fiainana.”—Jaona 3:36.
12. Inona ny dikan’ny hoe tsy anisan’izao tontolo izao?
12 Tsy anisan’izao tontolo izao izy ireo. Hoy i Jesosy tamin’i Pilato, mpitondra romanina: “Tsy anisan’ity tontolo ity ny fanjakako.” (Jaona 18:36) Vahoakan’ilay Fanjakana any an-danitra ny mpanara-dia an’i Jesosy, na aiza na aiza firenena misy azy. Tsy manao politika mihitsy àry izy ireo, ary tsy mandray anjara amin’ny ady. Tsy misakana ny olona tsy hiditra amin’ny antoko politika, na hilatsaka hofidina, na hifidy anefa izy ireo. Mankatò lalàna koa izy na dia tsy manao politika aza. Nahoana? Satria mandidy azy ireo “hanaiky ny manam-pahefana” ny Baiboly. (Romanina 13:1) Ahoana anefa raha mifanohitra amin’izay takin’Andriamanitra ny didin’ny fanjakana? Manahaka ny apostoly izy ireo ka manao hoe: “Andriamanitra no mpitondra anay ka izy no tsy maintsy ankatoavinay, fa tsy olona.”—Asan’ny Apostoly 5:29; Marka 12:17.
13. Inona no inoan’ny mpanara-dia an’i Jesosy momba ny Fanjakan’Andriamanitra, ary inona no ataon’izy ireo noho izany?
13 Mitory izy ireo hoe ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no hamaha ny olana mahazo ny olona. Hoy i Jesosy: “Hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity, ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra, vao ho tonga ny farany.” (Matio 24:14) Tsy mampirisika ny olona hitady vahaolana any amin’ny mpitondra olombelona ny mpanara-dia an’i Jesosy. Torin’izy ireo kosa fa ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no azo antenaina hamaha ny olana eto an-tany. (Salamo 146:3) Nasain’i Jesosy nivavaka momba an’io fitondrana any an-danitra io isika hoe: “Ho tonga anie ny fanjakanao! Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra!” (Matio 6:10) Milaza ny Baiboly fa ‘hanorotoro sy hanafoana an’ireo fanjakana rehetra’ misy ankehitriny io Fanjakana io, ‘fa izy kosa haharitra mandrakizay.’—Daniela 2:44; Apokalypsy 16:14; 19:19-21.
14. Iza no fivavahana hitanao hoe mahafeno ny fepetra takina amin’ny fivavahana marina?
14 Eritrereto àry izao: ‘Iza no fivavahana mampianatra an’izay lazain’ny Baiboly sy mampahafantatra ny anaran’i Jehovah? Iza no fivavahana misy mpivavaka tena mifankatia, mino an’i Jesosy, tsy anisan’izao tontolo izao, ary mitory fa ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no hamaha ny olana mahazo ny olona? Iza amin’ny fivavahana rehetra misy ankehitriny no mahafeno an’ireo fepetra rehetra ireo?’ Ny Vavolombelon’i Jehovah.—Vakio ny Isaia 43:10-12.
15. Inona no takin’Andriamanitra amintsika, ankoatra ny hoe mino fa misy izy?
15 Tsy ampy ny mino an’Andriamanitra, raha te hampifaly azy ianao. Milaza mantsy ny Baiboly fa ny demonia aza mba mino hoe misy izy. (Jakoba 2:19) Tsy manao ny sitrapon’Andriamanitra anefa izy ireo, sady tsy ankasitrahany. Raha te ho tian’Andriamanitra àry isika, dia tsy maintsy manao ny sitrapony. Tsy maintsy miala amin’ny fivavahan-diso koa isika, ary manaraka ny fivavahana marina.
16. Inona no tokony hataontsika, raha nandray anjara tamin’ny fivavahan-diso isika?
16 Tsy tokony handray anjara amin’ny zavatra ataon’ny fivavahan-diso isika. Izao mantsy no nosoratan’ny apostoly Paoly: “‘Mivoaha eo aminy ianareo, ary misaraha aminy’, hoy i Jehovah, ‘ary aza mikasika intsony izay maloto’, ‘dia handray anareo aho.’” (2 Korintianina 6:17; Isaia 52:11) Tokony hialantsika àry izay misy ifandraisany amin’ny fivavahan-diso, na inona izany na inona.
17, 18. Inona no antsoina hoe “Babylona Lehibe”, ary nahoana ianao no mila ‘mivoaka avy ao aminy’ haingana?
17 Antsoin’ny Baiboly hoe “Babylona Lehibe” ny karazana fivavahan-diso rehetra. * (Apokalypsy 17:5) Anaran-tanàna fahiny ilay hoe Babylona, ary tao no nisy fivavahan-diso voalohany, taorian’ny Safodrano tamin’ny andron’i Noa. Tao no nanomboka ny ankamaroan’ny fampianarana sy fombafomba fanaon’ny fivavahan-diso amin’izao. Nivavaka tamin’ny andriamanitra telo izay iray, ohatra, ny Babylonianina. Ny Andriamanitra telo izay iray koa izao no tena ampianarin’ny fivavahana maro. Milaza anefa ny Baiboly fa iray ihany no tena Andriamanitra, dia i Jehovah, ary Zanany kosa i Jesosy Kristy. (Jaona 17:3) Nino koa ny Babylonianina fa manana fanahy tsy mety maty ny olona, ka mety hijaly any amin’ny toerana iray io fanahy io. Maro be koa izao ny fivavahana mampianatra fa manana fanahy tsy mety maty ny olona, ary mety hijaly any amin’ny afobe izy io.
18 Niely eran-tany ilay fivavahana tany Babylona fahiny, ka mety tsara raha antsoina hoe Babylona Lehibe ny fivavahan-diso rehetra eran-tany. Nilaza anefa Andriamanitra fa ho rava tampoka ny fivavahan-diso rehetra. Izany no mahatonga an’i Jehovah hilaza fa mila misaraka tanteraka amin’i Babylona Lehibe ianao. “Mivoaha avy ao aminy” haingana, hoy izy, dieny mbola misy fotoana.—Vakio ny Apokalypsy 18:4, 8.
Ho be lavitra noho izay nafoinao no ho azonao, raha manompo an’i Jehovah miaraka amin’ny vahoakany ianao
19. Inona no ho azonao rehefa manompo an’i Jehovah ianao?
19 Mety tsy hifandray aminao intsony ny olona sasany, rehefa miala amin’ny fivavahan-diso ianao. Ho be lavitra noho izay nafoinao anefa no ho azonao, raha manompo an’i Jehovah miaraka amin’ny vahoakany ianao. Hahazo rahalahy sy anabavy be dia be ianao, toa an’ireo mpianatr’i Jesosy nahafoy zavatra maro mba hanarahana azy. Ho lasa fianakavianao ireo Kristianina marina an-tapitrisany eran-tany, izay tena tia anao. Afaka manantena hiaina mandrakizay “ao amin’ilay tontolo ho avy” koa ianao. (Vakio ny Marka 10:28-30.) Mety hianatra Baiboly ireo olona nanohitra anao any aoriana any, ary hanompo an’i Jehovah.
20. Hanao ahoana ny hoavin’ny olona manaraka ny fivavahana marina?
20 Milaza ny Baiboly fa tsy ho ela Andriamanitra dia hamarana an’ity tontolo ratsy ity, ary hanorina tontolo vaovao hanjakan’ny fahamarinana. (2 Petera 3:9, 13) Hahafinaritra tokoa rehefa ny Fanjakany no hitondra! Fivavahana iray ihany sisa amin’izay no ho eto an-tany, dia ny fivavahana marina. Tsy aleonao àry ve manao an’izay rehetra azo atao dieny izao, mba hiarahana amin’ny olona manaraka ny fivavahana marina?
MIAVAKA NY MPANOMPON’ANDRIAMANITRA SATRIA...
mampianatra an’izay lazain’ny Baiboly
mivavaka amin’i Jehovah irery ihany, ary mampahafantatra ny anarany
manaiky fa amin’ny alalan’i Jesosy no hamonjen’Andriamanitra ny olona
tsy anisan’izao tontolo izao
mitory hoe ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no hamaha ny olana mahazo ny olona
^ feh. 17 Jereo ny Fanazavana Fanampiny, “Inona no Atao hoe ‘Babylona Lehibe’?”, raha tianao ny hahita porofo fa ny fivavahan-diso eran-tany tokoa no atao hoe Babylona Lehibe.
Iray ihany ny fivavahana marina. —Matio 7:13, 14.
Ny fampianarany sy ny fanaony no amantarana ny fivavahana marina.—Matio 7:16, 17.
Ny Vavolombelon’i Jehovah no manaraka ny fivavahana ankasitrahan’Andriamanitra.—Isaia 43:10.
Fivavahana Ankasitrahan’Andriamanitra (Fizarana 1)
Fivavahana Ankasitrahan’Andriamanitra (Fizarana 2)